ဖိုဒန်ရဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေနဲ့ အက်စတန်ဗီလာ ၁-၂ မန်စီးတီးပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ ပြောစရာ ၅ ချက် – Sports A2Z
Analysis • Match Report • Premier League
ဖိုဒန်ရဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေနဲ့ အက်စတန်ဗီလာ ၁-၂ မန်စီးတီးပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ ပြောစရာ ၅ ချက်
၁။ ခြေရာလက်ရာမပျက်တဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ ချန်ပီယံခြေစွမ်း
ပထမပိုင်းမပြီးခင်လေးမှာပဲ မန်စီးတီးခံစစ်မှူး ဂျွန်စတုန်းစ် အနီကတ်နဲ့ အထုတ်ခံလိုက်ရသလို ဒုတိယပိုင်းအစ ၁၂ မိနစ်မှာ ဗီလာရဲ့ မက်တီကက်ရှ် နှစ်ဝါတနီနဲ့ အထုတ်ခံလိုက်ပြန်တယ်။ တယောက်လျော့နဲ့ ကစားရတော့မလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးက ချန်ပီယံခြေစွမ်းကို ပြသပြီး ခြေရာလက်ရာမပျက် ကစားသွားခဲ့သလို ဂိုးဦးဆောင်ထားတဲ့ပွဲမှာ တမှတ်မှ မဆုံးရှုံးဖူးသေးတဲ့ ဗီလာကို Come Back လုပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ရလဒ်နဲ့ ၃ မှတ်အပြည့် ဆုပ်ကိုင်ရင်း အောင်စိတ်နဲ့ ပွဲခံသွားခဲ့တယ်။
၂။ ဖိုဒန်ရဲ့တောက်ပမှုမှာ မျက်နှာပွင့်ရတဲ့ ပပ်
ဖိုဒန်က အသက် ၂၁ နှစ်တောင် မပြည့်သေးချိန်မှာ ပွဲတိုင်းနီးပါးကို တည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ ကစားပြနေတယ်။ ပက်ပ်အတွက် အတော်လေးအားရစရာပါ။ ဒေါ့မွန်နဲ့ပွဲက ကန်သွင်းချက်အပြီးမှာ သူက ဗီလာကို ချေပဂိုး သွင်းခဲ့ပြန်တယ်။ သူဝင်ကစားတိုင်း ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ပွဲ မရှိသလောက်ရှားနေတာက ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အိပ်မက်မှာ ဖိုဒန်ရဲ့တောက်ပမှုက ပပ်ကို မျက်နှာပွင့်စေခဲ့ပါတယ်။
၃။ ရာသီဝက်အပြီးမှာ ကိုယ်ပိုင်အစဉ်အလာကို ဆက်ထိန်းသွားတဲ့ ဗီလာ
ဗီလာရဲ့အားနည်းချက်က အရင်နှစ်ကလည်း ရာသီဝက်အပြီးမှာ ခြေစွမ်းထိုးကျသွားခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကို ဒီနှစ်မှာလည်း ဆက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး ရာသီအဖွင့်မှာ တာထွက်ကောင်းသလောက် အခုချိန်မှာတော့ ခွာလိပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ခြေစွမ်းပိုင်းအရ အားရစရာမရှိသလို ဂရီးလစ်ရှ်မကစားနိုင်ချိန်မှာ ဒင်းန် စမစ်ရဲ့အသင်းက နိုင်လိုစိတ်ရော ပေါက်ကွဲမှုပါ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။
၄။ ဂျွန်စတုန်းစ် အနီကတ်ထိတာက ပပ်အတွက် သတင်းကောင်းလား?
မန်စီးတီးအတွက် ကံထမ်းလာတဲ့ကိစ္စက အားကိုးရတဲ့ ဂျွန်စတုန်းစ် အနီကတ်ထိခြင်းလားလို့ တွေးစရာပါ။ သူက လာမယ့်ရက်မှာ ကစားမယ့် EFL ဖိုင်နယ်ကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပြီး ကောင်းကောင်းအနားယူခွင့် ရသွားပါမယ်။ ဒီပွဲအပြီး ကြားရက်မှာ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးမတိုင်ခင် တစ်ပတ်တိတိနားခွင့်ရမယ့်သူက လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ ပီအက်စ်ဂျီကို ရင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာပါ။
၅။ ပက်ပ် စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးကို အလှဆင်နေတဲ့ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗား
ဒီပွဲမှာ ဖိုဒန်နဲ့ ရိုဒရီတို့က ဂိုးသွင်းရှင်တွေ ဖြစ်သော်ငြား ဆေးလ်ဗားက အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့နည်းစနစ်ကျေညက်မှုနဲ့ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ထက်မြက်မှုက ဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗားအလွန်မှာ ပက်ပ်ခံစားနေရတဲ့ အသီးအပွင့်တွေဖြစ်တယ်။ မိုနာကိုကနေ မှန်မှန်ကန်ကန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ ဘာနာဒိုရဲ့အချိန်အခါကောင်းက မန်စီးတီးတိုက်စစ်ကို ထိထိရောက်ရောက် အလှဆင်ပေးနေပါတယ်။
၁။ ေျခရာလက္ရာမပ်က္တဲ့ မန္စီးတီးရဲ႕ ခ်န္ပီယံေျခစြမ္း
ပထမပိုင္းမၿပီးခင္ေလးမွာပဲ မန္စီးတီးခံစစ္မႉး ဂြၽန္စတုန္းစ္ အနီကတ္နဲ႔ အထုတ္ခံလိုက္ရသလို ဒုတိယပိုင္းအစ ၁၂ မိနစ္မွာ ဗီလာရဲ႕ မက္တီကက္ရွ္ ႏွစ္ဝါတနီနဲ႔ အထုတ္ခံလိုက္ျပန္တယ္။ တေယာက္ေလ်ာ့နဲ႔ ကစားရေတာ့မလိုျဖစ္ခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးက ခ်န္ပီယံေျခစြမ္းကို ျပသၿပီး ေျခရာလက္ရာမပ်က္ ကစားသြားခဲ့သလို ဂိုးဦးေဆာင္ထားတဲ့ပြဲမွာ တမွတ္မွ မဆုံးရႈံးဖူးေသးတဲ့ ဗီလာကို Come Back လုပ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ရလဒ္နဲ႔ ၃ မွတ္အျပည့္ ဆုပ္ကိုင္ရင္း ေအာင္စိတ္နဲ႔ ပြဲခံသြားခဲ့တယ္။
၂။ ဖိုဒန္ရဲ႕ေတာက္ပမႈမွာ မ်က္ႏွာပြင့္ရတဲ့ ပပ္
ဖိုဒန္က အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးခ်ိန္မွာ ပြဲတိုင္းနီးပါးကို တည္ၿငိမ္တဲ့ေျခစြမ္းနဲ႔ ကစားျပေနတယ္။ ပက္ပ္အတြက္ အေတာ္ေလးအားရစရာပါ။ ေဒါ့မြန္နဲ႔ပြဲက ကန္သြင္းခ်က္အၿပီးမွာ သူက ဗီလာကို ေခ်ပဂိုး သြင္းခဲ့ျပန္တယ္။ သူဝင္ကစားတိုင္း ေျခစြမ္းမျပႏိုင္တဲ့ပြဲ မရွိသေလာက္ရွားေနတာက ပရီးမီးယားလိဂ္နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္အိပ္မက္မွာ ဖိုဒန္ရဲ႕ေတာက္ပမႈက ပပ္ကို မ်က္ႏွာပြင့္ေစခဲ့ပါတယ္။
၃။ ရာသီဝက္အၿပီးမွာ ကိုယ္ပိုင္အစဥ္အလာကို ဆက္ထိန္းသြားတဲ့ ဗီလာ
ဗီလာရဲ႕အားနည္းခ်က္က အရင္ႏွစ္ကလည္း ရာသီဝက္အၿပီးမွာ ေျခစြမ္းထိုးက်သြားခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို ဒီႏွစ္မွာလည္း ဆက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ရာသီအဖြင့္မွာ တာထြက္ေကာင္းသေလာက္ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ခြာလိပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ေျခစြမ္းပိုင္းအရ အားရစရာမရွိသလို ဂရီးလစ္ရွ္မကစားႏိုင္ခ်ိန္မွာ ဒင္းန္ စမစ္ရဲ႕အသင္းက ႏိုင္လိုစိတ္ေရာ ေပါက္ကြဲမႈပါ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရတယ္။
၄။ ဂြၽန္စတုန္းစ္ အနီကတ္ထိတာက ပပ္အတြက္ သတင္းေကာင္းလား?
မန္စီးတီးအတြက္ ကံထမ္းလာတဲ့ကိစၥက အားကိုးရတဲ့ ဂြၽန္စတုန္းစ္ အနီကတ္ထိျခင္းလားလို႔ ေတြးစရာပါ။ သူက လာမယ့္ရက္မွာ ကစားမယ့္ EFL ဖိုင္နယ္ကို လြဲေခ်ာ္မွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းအနားယူခြင့္ ရသြားပါမယ္။ ဒီပြဲအၿပီး ၾကားရက္မွာ ပီအက္စ္ဂ်ီနဲ႔ ကစားမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆီမီးမတိုင္ခင္ တစ္ပတ္တိတိနားခြင့္ရမယ့္သူက လန္းလန္းဆန္းဆန္းနဲ႔ ပီအက္စ္ဂ်ီကို ရင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာပါ။
၅။ ပက္ပ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးကို အလွဆင္ေနတဲ့ ဘာနာဒို ေဆးလ္ဗား
ဒီပြဲမွာ ဖိုဒန္နဲ႔ ႐ိုဒရီတို႔က ဂိုးသြင္းရွင္ေတြ ျဖစ္ေသာ္ျငား ေဆးလ္ဗားက အေကာင္းဆုံးကစားသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕နည္းစနစ္ေက်ညက္မႈနဲ႔ ေျခစြမ္းတည္ၿငိမ္ထက္ျမက္မႈက ေဒးဗစ္ ေဆးလ္ဗားအလြန္မွာ ပက္ပ္ခံစားေနရတဲ့ အသီးအပြင့္ေတြျဖစ္တယ္။ မိုနာကိုကေန မွန္မွန္ကန္ကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ဘာနာဒိုရဲ႕အခ်ိန္အခါေကာင္းက မန္စီးတီးတိုက္စစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အလွဆင္ေပးေနပါတယ္။
စပါးစ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲအပြီး လန်ဒန်မှာ ပြုံးပြုံးကြီး လျှောက်သွားနေတဲ့ မော်ရင်ညို
VAR က ပညာစွမ်းပြပြန်တဲ့ စပါးစ် 2-1 ဆောက်သမ်တန် ပွဲအပြီး ထူးထူးခြားခြား ထုတ်နုတ်ပြောစရာအချက်များ